2016ပြီလ 44 | 90 ၏စာမျက်နှာ 2020 | NAB သတင်းများ | XNUMX NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » ဧပြီလ (စာမျက်နှာ 44)
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်, ဒစ်ဂျစ်တယ် - Marketplace # 207-16
အမေရိကန်ပြည်သူ့မီဒီယာတည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်ဗီဒီယိုများနှင့် podcasts တွေကိုထုတ်လုပ်ကူညီပါ? အခြို့သောအသံနှင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ Edit ။ Adobe က Photoshop ကိုသို့မဟုတ်အလားတူပုံရိပ် tools တွေကိုသုံးပြီးသရုပ်ပြစာကျွမ်းကျင်မှု ... ။ more >>
HBO ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာညှိနှိုင်းရေးမှူးမီဒီယာ & Technology မှစစ်ဆင်ရေး
HBO တည်နေရာ: များ၏ Los Angeles မြို့, CA အမေရိကန်အလုပ်အဖွဲ့အသိပညာနှင့် execute နိုင်စွမ်း, ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်, အရောင်မှန်ကန်သော, ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ကာတွန်းဖန်တီးမှု, DVD ကိုအာဏာပိုင်များနှင့် encoding ကအသုံးပြုဖို့ digitizing ... နောက်ထပ် >>
ဗာဂျီးနီးယားတည်နေရာတက္ကသိုလ်: Charlottesville VA သို့အမေရိကန်သူ / သူမ, အလင်းရောင်ကဗီဒီယိုပစ်ခတ်မှုစတိုင်မှဆန်းသစ်, ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးချဉ်းကပ်မှုအပါအဝင်ဗီဒီယိုနှင့်မာလ်တီမီဒီယာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ကွပ်မျက်အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုသရုပ်ပြကြပါလိမ့်မယ် ... နောက်ထပ် >>
12G-SDI-IP ကို ​​Hybrid ကိုပလက်ဖောင်းများအတွက် PESA ကို select MACOM Chipset
MACOM ရဲ့ဆုရ Chipset PESA ရဲ့ Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများဗီဒီယိုစနစ် Huntsville, Alabama အဘိဓါန်ဖွင့်မည် - PESA တစ်ဦးဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ streaming များဖြေရှင်းချက်၏အဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖြန့်ဖြူးထုတ်ကုန်တစ်ခုကို MACOM အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်း, 12G-SDI chipset ကိုချမှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာ တစ်ခုတည်း 4Gbps link ကိုအသုံးချဖို့ 60K / 12p ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ပံ့ပိုးသောနည်းပညာ Solutions Inc ကို (MACOM) ။ resolution ကတိုး ...
TVU ကွန်ယက် Accelerator Breaking News, Coverage နှင့်နှစ်ဦးက New cloud-based Solutions နှင့်အတူမဟာထိန်းချုပ်ရေးကျော်အိုင်ပီ-အခြေပြုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာပေး
TVU အချက်ပေးနှင့် TVU စစ်ဌာနချုပ် Center ကအကူအညီလူငယ်ကဏ္ဍ သာ. ကွီးမွတျအချိန်မီ, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေး Mountain View, CA နှင့်အတူပုံပြင်များ Developing မှတုံ့ပြန် - TVU ကွန်ယက်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ IP ကိုဗီဒီယိုကဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာခေါင်းဆောင်, ယနေ့သစ်ကို cloud-based TVU အချက်ပေးရရှိမှုထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် TVU စစ်ဌာနချုပ် Center ကလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများ။ TVU အချက်ပေးစေသည်မိုဃ်းတိမ်-တည်ခင်းဧည်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ် ...
စုစုပေါင်းပေါင်ခံန်ဆောင်မှုများတည်နေရာ: တစ်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအထူးကုအမျှ Milford မှန် CT အမေရိကန်, သငျသညျ :. ပါလိမ့်မယ် အဆိုပါဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုအထူးကု >> ပို ... ဗီဒီယိုများ, ကွက်ကို၏ကွပ်မျက်ဦးဆောင်များအတွက်တာဝန်ရှိပါလိမ့်မည်
သတင်းထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ရှိရင်းစွဲ NewsMaker စနစ်များစိန်ခေါ်မှုများ
14, ဧပြီ 2016 - - MOS သတင်းကဏ္ဍကွန်ပျူတာစနစ်များ & NewTek TriCaster Moorpark,, CA နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး NewsMaker စနစ်များ, သတင်းကဏ္ဍအလိုအလျောက်ဆော့ဖ်ဝဲ provider က, ယနေ့အဓိက MOS အခြေစိုက်သတင်းကဏ္ဍကွန်ပျူတာစနစ်များနှင့်အဆင့်မြင့် Edition ကို NDI NewTek TriCaster အကြားတံတားပေးယင်း၏ထုတ်ကုန်အသစ်စီးရီးထုတ်ပြန်ကြေညာ ။ NAB မှာ NewsMaker Connect ကို, ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် Compose ... : NewsMaker စနစ်များသည်၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်ပြပါလိမ့်မည်
အိုင်ပီထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာအဘို့အသက်တမ်းတိုး Vision ၏မွေးစား NewTek NDI
Atlanta, ဧပြီ 14, 2016 - ပြန်လည် Vision ၏ယနေ့ယင်း၏ ProPresenter မီဒီယာတင်ဆက်မှုနှင့် CG လျှောက်လွှာအတွက် IP-based ထုတ်လုပ်မှု Workflows များအတွက်စံ NewTek ရဲ့ပွင့်လင်းကွန်ယက်စက်ပစ္စည်း Interface (NDI ™) ၏င်း၏မွေးစားကြေညာခဲ့သည်။ NDI enabled နှင့်အတူ, ProPresenter အဆဗီဒီယိုအရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်, တစ်ဦးစံ Ethernet ဟာ local area network နဲ့ချိတ်ဆက်သည်အခြား NDI-enabled devices များနှင့်စနစ်များအားဖြင့်တစ်ဦးအရင်းအမြစ်အဖြစ်မှတ်မိပါလိမ့်မည် ...
44 ၏စာမျက်နှာ 90«ပထမဦးစွာ...203040«4243444546 » 506070...နောက်ဆုံး»